LOZAM-PIFAMOIVOIZANA : Maty tsy tra-drano ilay tovolahy nitondra “moto”
Toy ny tamin’ny taon-dasa , nahavaky vava ny rehetra ny trangana lozam-pifamoivoizana, izay saika ireo mpitondra moto avokoa ny ankamaroany. 14 janvier 2020
Misesilany ireo namoy ny ainy vokatr’izany, manginy fotsiny ireo naratra. Raha ny loharanom-baovao voaray omaly , lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ihany koa no nitranga tany amin’ny lalam-pirenena fahatelo, Antsahasoa fokontany Andranotsimihozo Kaominina Talata Volonondry Distrikan’ Antananarivo Avaradrano, ny alahady hariva lasa teo , tokony ho tamin’ny dimy ora sy sasany tany ho any.
Tovolahy iray 24 taona niaraka tamin’ny olon-tiany 22 taona nitaingina “ moto “ no niharan-doza tamin’io fotoana io rehefa nifandona tamina fiara mpitatitra iray tao an-toerana. Nohamafisin’ireo nahita maso fa nandeha mafy dia mafy nifaninana tamina moto iray hafa teo alohany ity farany ka izao niharam-boina izao. Na ny fiara nifandona taminy koa aza dia fantatra fa nandeha mafy ihany koa. Avy hatrany dia nidaraboka tamin’ny arabe ireto farany.
Naratra mafy ilay lehilahy nitondra moto, tsy nahatsiaro tena intsony, nandriaka ny rà ary fantatra fa avy hatrany dia namoy ny ainy teo no ho eo ihany ity farany . Noezahina novonjena kosa ilay ramatoa kely niaraka taminy ka manohy mitsabo tena ao amin’ny Hjra hatreto. Raha ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny Zandary tao an-toerana dia tena ketraka ireto farany satria dia tsy misy mihaino mihitsy ireo toro-lalana momba ny fifamoivoizana apetraka amin’iny faritra iny . Samy manao izay tiany ireo mpitondra fiara sy moto noho ny tsy fisian’ny Polisy misahana ny fifamoivoizana ao amin’ny Rn3. Tsy vao izao akory fa efa mateti-piavy loatra ny loza miseho ao hoy hatrany ireo Zandary.